လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: November 2012
How to Crack KASPERSKY antivirus all Version’s MANUALLY
Thursday, November 22, 2012 Anti-virus & Security
Hello Guy’s Welcome To LG4u. You All Know About Kaspersky. Itsabest antivirus in world having Rank 2. i m going to show you How To CRACK/PATCH kaspersky 2012 and u can do this trick with all Version’s of Kaspersky. So here the Hack Start’s…
Anti-virus & Security,
ဆီးချိုရောဂါ အတွက် ကြက်သည်းခြေ
Wednesday, November 07, 2012 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
ဆီးချိုရောဂါအတွက် ဆေးတစ်လက်ပါ။....... လွယ်လို့ မယုံမရှိနဲ့ဗျို့..
ကြက်သည်းခြေ နေတိုင်း စားပေးရပါတယ်။ ကြက်သည်းခြေကို ဆီသုတ်ပြီး ကြက်သည်းခြေကို အခြောက်လှန်းရပါတယ်။ ကြက်သည်းခြေဟာ ခြောက်သွားတော့ အနံအသက် သိပ်မထွက်တော့ ဘူး သေးငယ်တော့ စားရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ကြက်သည်းခြေက သိပ်ခါးတော့ ဆီးချိုရောဂါ ထွက်ပြေးတော့တာပေါ့...........
How to Crack KASPERSKY antivirus all Version’s MAN...